Ali Mahdi iyo Xasan Sheekh oo loo sheegay in ay Nayroobi ku sugaan Jandai Frezier iyo Maxamed Dheere oo dadaal ugu jira sidii asaga ama cid uu wato looga dhigi lahaa raisul wasaare. Ruunkinet 18/11/07
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynii hore ee Soomaaliya mudane Cali Mahdi Maxamed iyo Xasan Sheekh oo ah ninka uu u dooonaya in loo magacaabo raisul wasaaraha cusub lagu wargeliyay in ay Nayroobi ku sugaan Jandai Frazier oo ah kaaliyaha hoghayaha arrimaha Afrika ee dowladda Mareykanka.
Cali Madhi iyo Xasan Sheekh oo maanta aadi lahaa magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in ay Nayroobi kula kulmi doonaan Ms Jandai Frezier dhawaan inta aan la magacaabi raisul wasaaraha cusub.
Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamed Cumar Xabeen (Maxamed Dheere) ayaa la sheegay in uu wado ol ole aad u weyn oo uu ku doonayo in laga dhigo raisul wasaare asaga ama nin uu doonayo.
Maxamed Dheere oo haatan ku sugan magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in uu horay u soo kexeystay dad aad u badan oo ka tirsan wax garadka beeshiisa si uu madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ugu dhaadhiciyo in uu asaga yahay kan lagala soo xiriirayo beesha Muddullood marka laga hadlayo siyaasadda.
Maxamed Dheere ayaa warar aan la hubin sheegayaan in uu doonayo in laga dhigo raisul wasaare Col. Nuur Cadde oo haatan jooga magaalada Baydhabo.
Nuur Cadde ayaa ka mid ah shaqsiyaadka ugu cad cad oo ay dad badan aaminsan hiyiin in laga dhigo raisul wasaare.
Cabdullahi Xuseen, Ruunkine, London